Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Onye dike njem nlegharị anya ọhụrụ si Albania pụta
Akụkọ Albania na -agbasa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche • WTN
Prọfesọ Klodi Gorica
A na -enye ndị otu họpụtara Hall of International Tourism Heroes onyinye onyinye afọ ma ọ bụ ọpụrụiche.
Taa Prọfesọ Klodina Gorcia nke Tirana, Albania nabatara ka ọ bụrụ dike njem nlegharị anya n'ime ụlọ ezumezu mba ụwa nke ndị dike njem.
Klodiana Gorica bụ prọfesọ maka Njikwa Njem Nleta Sustainable, Azụmaahịa Azụmaahịa, na Mgbasa Ọhịa Njem Nleta na Mahadum Tirana.
Ndị otu njem nlegharị anya nke ụwa gosipụtara ya n'ime ụlọ ndị dike njem nlegharị anya mba ụwa taa.
Ụlọ Nzukọ Ndị dike njem nlegharị anya mba ofesi mepere site na nhọpụta naanị iji mata ndị gosipụtara ọpụrụiche pụrụ iche, ihe ọhụrụ, na omume. Ndị dike njem nlegharị anya na -aga n'ihu.
Blendi Klosi, onye minista na -ahụ maka njem na gburugburu Albania bụ onye họpụtara Prof. Gorica na Hall of Tourism Heroes.
Minista ahụ kwuru, sị:
1. Ọ nọla, ruo ọtụtụ iri afọ, onye dị mkpa raara nye nkwalite mba ọdịda anyanwụ Balkan na ọkachasị Albania dị ka ebe pụrụ iche na Europe na n'ihu;
2. Ọ rụọla ọrụ dị ukwuu n'ịmepụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị na atụmatụ kacha mma iji nweta nkwado. njem na mpaghara
3. N'ihi ike ya na mbọ ọ na -agba nke ọma ewepụtala njikọ siri ike n'etiti ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ka elu na ụlọ ọrụ ọha (Ministry of Tourism and Environment), na oru na atụmatụ niile;
4. N'ihi ebumnuche ya na netwọkụ ụwa niile na mpaghara Balkan, mana ọbụghị naanị, na 2017 (afọ 30 nke njem nlegharị anya), yana InSET (www.inset.al) ebe ọ bụ onye isi ala na onye isi oche yana n'okpuru ntuziaka UNWTO, yana Ministry of Tourism in Albania, ọ haziri ọgbakọ mba ụwa nke mbụ maka “Iwulite mmekorita nke ọha na onwe maka mmepe na-adigide site na njem”.
Ndị kacha mkpa dị mkpa nọ na -ewepụta oge dị oke mkpa ma dịkwa mkpa maka njem nlegharị anya na Albania.
Site na 2011 ruo 2016 ọ bụ osote onye isi na ngalaba akụnụba, Mahadum Tirana; onye so na Kọmitii Sayensị 2008-2012, na mgbe onye otu 2016 nke Council of Prọfesọ; Ọkachamara mba na nkwa mmụba dị elu nke ụlọ ọrụ Albanian kemgbe 2008; na -etinye aka na atụmatụ mba ụwa, ọgbakọ na ọrụ, ọ bụghị naanị ọkachamara kama ọ na -eje ozi dị ka onye ọbịa ọbịa, na -ekepụta netwọkụ maka Balkan na njem nlegharị anya Europe, nleba anya, imepụta na ijikwa tebụl okirikiri na nnọkọ; onye otu nọ na kọọdụ nchịkọta akụkọ/kọmitii nyocha/onye isi okwu na akwụkwọ akụkọ na ọgbakọ mba ụwa, yana ahụmịhe mba ụwa na ọzụzụ na nkuzi kemgbe 1997 na mahadum dị na mba ofesi.
Onye edemede na onye na -ede akwụkwọ na akwụkwọ sayensị 13 dị iche iche, mkpụrụedemede 3 (dị ka ndị a) nke ebipụtara na Springer na IEDC, Slovenia; Springer, Germany, na Switzerland; na -ebipụta akụkọ na nzukọ sayensị ụwa na akwụkwọ akụkọ sayensị. Ọrụ nyocha na mba ofesi na mahadum mba dị na UK, USA, Belgium, Portugal, Norway, Slovenia, Italy, France, Israel, Portugal, Croatia, Austria, Serbia, Bosnia na Hercegovina, Montenegro, Turkey, Macedonia, Bulgaria, Rumania, wdg .
"Njem nlegharị anya obodo - Nlereanya nke na -eweta nkwado akụ na ụba"
"Nlereanya maka njikwa Society Information site na ICT Market Development Strategies - ngwa na Albania na mba ndị ọzọ na -emepe emepe"
"Njem nlegharị anya ọdịbendị".
Juergen Steinmetz, onye isi oche nke World Tourism Network na -ekwu, sị: “Anyị na -anabata Prọfesọ Gorica ka a nabata ya. Halllọ Nzukọ Mba ofesi Ndị Nleta njem. Profaịlụ ya, ntụnyere ya na ihe ọmụma ya dị egwu. Obi dị anyị ụtọ na anyị nwekwara ya dịka onye otu World Tourism Network. Ụwa chọrọ ndị ndu dịka Prọfesọ Gorica. ”
Maka ozi ndị ọzọ gaa na mmemme ihe nkiri dike njem nleta www.egburu.nez
Njem nlegharị anya Kashmir ekwu, sị:
October 11, 2021 na 07: 37
Ekele Prọfesọ Klodina Gorcia maka ịbụ onye amaara maka ọrụ pụrụ iche ọ dị ezigbo mkpa ịnakwere mbọ nke ndị mmadụ n'otu n'otu na otu na -arụ ọrụ n'ịmepụta njem nlegharị anya na gburugburu ebe obibi. anyị chọrọ ọtụtụ mmadụ dịka Prọfesọ Klodina Gorcia ịgbasa ozi na ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ a.